यस्तो छ ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान. कहाँ-कहाँ हुन्छ भारी बर्षा ? « Postpati – News For All
असार ९, काठमाडौँ । मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर वर्षा जारी छ ।
मनसुनी वायुकै प्रभावले आज दिउँसो चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।